သစ်ခွ ချစ်သူတိုင်း စိတ်ကြည်နူး စေဖို့ (၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » သစ်ခွ ချစ်သူတိုင်း စိတ်ကြည်နူး စေဖို့ (၂)
သစ်ခွ ချစ်သူတိုင်း စိတ်ကြည်နူး စေဖို့ (၂)
Posted by mandalarthu on Oct 16, 2011 in Drama, Essays.., My Dear Diary, Photography | 15 comments
အိမ်ရှေ့ ဥယျာဉ်ထဲမှာ ပွင့် ဖူးနေသောေ၇ာင်စုံ သစ်ခွပန်းလေး တွေကို ဆန်းသစ်လှပတဲ့ ပုံစံလေးတွေနဲ့ရိုက်ကြည့် ထားတာပါ။
ဒီနေ ကျန်တဲ့ ပုံလေးတွေကို မျှဝေ လိုက်တာပါ။
မင်္ဂလာဆောင်သွားရင် ပန်သွားလို့ရအောင် ခူးသွားပြီနော်
ကိုယ်တိုင် မင်္ဂလာဆောင်လျှင်လည်း ခြံပိုင်ရှင်ရွာသူ၊ရွာသားထဲက စပွန်ဆာပေးမယ့်လူတွေလည်း ရှိပါတယ် မိုးပွင့်ဖြူရဲ့ ….
သစ်ခွစိုက်တာ အရမ်းကို ဂရုစိုက်ရတယ်လို့ ကြားဖူးတယ် အပွင့်လေးတွေ အချိန်မှီပွင့်အောင် အားဆေး ထိုးရတယ်လို့လည်း ကြားဖူးတယ် … သူများပန်းစိုက်လို့ ရှင်လာပြီဆိုလျှင်သာသဘောကျတတ်တာ … ကိုယ်တိုင်ကတော့ ဘာအပင်မှ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် မစိုက်ဖူးဘူး …
သီတင်းလည်းကျွတ်ပြီဆိုတော့.. ရွာထဲမှာ သစ်ခွပန်းတွေလည်း ဝေဝေဆာဆာ ပွင့်ပြီပေါ့.. မိတ်ကပ်နဲ ဝတ်စုံး တွေ ပဲကျန်တော့တယ်… ကဲကဲ.. ဒီနှစ်သီတင်းကျွတ်မှာ ရွာထဲမှာ ဘယ်သူအရင် ကျွတ်မလဲဗျို့.. ကျွတ်မယ်ဆိုလည်းခေါင်းလောင်းလေး ထိုးကြပါအုံး..
ကြိုက်သလောက်သာယူ၊ အကုန်ပေးတယ်။
မင်္ဂလာဆောင်သွားရုံတင်သာမကဘူး ကိုယ်တိုင် မင်္ဂလာဆောင်လျှင်လည်း ခြံပိုင်ရှင်က
သစ်ခွစိုက်တာအရမ်းကို ဂရုစိုက်ရပါတယ်..မေမေကတော့ မပွင့် ခင်အရိပ်တကြည့် ကြည့် နဲပေါ့ 
တို့ ကတော့ ပွင့် ပြီး အရိပ်တကြည့် ကြည့် နဲ့ ပေါ့ ………..အတူတူပါဘဲ…….ဟဲဟဲ။
We R One ရေ……..သစ်ခွပန်းတွေ တင်မိတာ…သီတင်းကျွတ်ကာလဆိုတော့လည်း….သစ်ခွပန်းတွေ.စပွန်ဆာပေးရမှာပေါ့ …..
မိတ်ကပ်န့ဲ ဝတ်စုံ တွေ တော့ We R One က …….စပွန်ဆာပေးမှာတဲ့ ။
ကဲကဲ…..ရွာထဲ ကဘယ်သူအရင် ကျွတ်မလဲဗျို့.. ..ခေါင်းလောင်းလေး တီးကြပါအုံး….
စိတ်…ကို ကြည်လင် ရွှင်မြူး…သွားစေတဲ့ အထိ ပန်းလေးတွေက ဆွဲဆောင်ပါတယ်။
ပုံ ရိုက်ချက်.. အလင်း အမှောင် ယူဆချက် နေ၇ာ ယူဆ ချက်တွေ..တော်တော် ကောင်းပါတယ် ။
အဲဒီလို..ပန်းလေးတွေ.ေ၇ာင်စုံ ဖူးပွင့်နေတဲ့ ခြံလေးထဲ..မှာ နေ နေရတဲ့ သူလေး..ဆိုတော့ …သိပ်ကို ပျော်နေမှာပဲ.နော်။
ကိုယ်လည်း ပန်းတွေ.ကို..အင်း……. သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ..ချစ်တ.ယ်။
ကိုယ်လည်း အဲလို ပန်းလေးတွေ..စိုက်ဦးမယ်။
စိတ်…ကို ကြည်လင် ရွှင်မြူး…သွားစေတယ် ဆိုလို့တကယ်ဝမ်းသာ၇ပါတယ်။ကျေးဇူးပါနော်။
ဓာတ်ပုံပညာက …..အခြေခံ အဆင့် လောက်သာရှိတာပါ။
ကဗျာဆရာတဦး ကဗျာတပုဒ်ကို ကိုယ်တိုင်ခံစားရေးဖွဲ့ ထားသလိုမျိုး ………….
ကိုယ်လဲ….. ပန်းကလေးတွေရဲ့ အလှကို …… ကိုယ်တိုင်ခံစား ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ထားလို့ ပါ။
လူသားတဦးအနေနဲ့ ……..သဘာဝပန်းကျင်ကို ချစ်မြတ်နိူးတယ်ဆိုတာ…..
လူသားတိုင်းမှာ……..ရှိကိုရှိသင့် တဲ့ စိတ်ထားတရပ်ပါဘဲလို့ ထင်ပါတယ်။
ပန်းတွေတင်ချင်တယ်ဆိုရင် ပန်းများများ ပွင့်နေတဲ့ ပန်းခြံထဲသွားရိုက်ပြီး တင်ရင် ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ် ။ တစ်ပွင့်နှစ်ပွင့်လောက်က ကြည့်ရတာ အားမရပါဘူး။
ကိုယ်တိုင်စိုက်တဲ့ အပင်ကပွင့်တဲ့ပန်းကလေးတွေက ကိုယ့်သားသမီးလေးတွေလိုပါဘဲ။
ကိုယ့်အတွက်တော့ အလှဆုံးပေါ့။အလှဆိုတာ ပန်းလေး၁ပွင့်ထဲလည်း လှတာပါဘဲ။
ဒါကို မျှဝေပေးတဲ့ စေတနာကို လေးစားပါတယ်။
မန်တလာသူလေး ရဲ့ ပုံတွေကို မြင်ရတော့
ရေစစ်ကန်နားမှာ နေတာများလား လို့ တွေးမိတယ်
တစ်ကယ်အမှန်ပဲ ဆိုရင်တော့ ဝင်းစံပါယ် မှာ
တွေ့ ဆုံပွဲလေး လုပ်လိုက်ရအောင်နော်
ဟား…ဟား…၀င်းစပယ်နဲ့မနီးပေါင်ဗျာ….…
မန္တလေးမှာက …၀ါသနာပါလို့ စိုက်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်သစ်ခွခြံလေးတွေ အများကြီးပါဗျာ……
မှန်းကြည့် ပေါ့ ဗျာ….
အနှိုင်းမဲ့ေ၇ အကြံ ပြုတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးပါ။ မှတ်ထားလိုက်ပြီနော်။
Ma padonmar ရေ……
မိမိရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပန်းခြံကပန်းတွေမို့ အများကို
ဟုတ်ပါပြီ။ ဒါဆို မင်္ဂလာဆောင်ရင် တော့ စပွန်ဆာပေးဦးနော်။ လာတောင်းမယ်နော်။
OK ပါ အနှိုင်းမဲ့ရေ။
မန္တလာသူ…ရေ..။ အသက်က ဘယ်လောက်လဲ..မသိလို့ ..ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲ..မသိ။ ကိုယ်က 24 ပါ ကိုယ့် ထက်ကြီးမယ်ထင်တယ်နော်။
ကိုယ့်ရဲ့ …အလင်းဆက်အကြောင်း….ပို့ စ်မှာ ကိုယ့်ကို မေးသွားတာလေး ဖြေပါရစေ။
ကိုယ်က အွန်လိုင်းပေါ် အရောက်နည်းတော့…တော်တော်နဲ့ မဖြေဖြစ်ခဲ့ ဘူး။
ကိုယ် လေးစား အားကျရတဲ့စာရေးဆရာကြီးတွေ..က ကိုယ့်ထက် ပို ကောင်းတဲ့ ပို မြင့်မြတ်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ..နဲ့ စာရေးနေကြတယ်..လို့ ထင်ပါတယ် ။
ဆရာကြီး..ဇော်ဂျီ..ဆိုရင် မြန်မာ စာပေလောကနဲ့ါမ်ြန်မာ ပြည်သူတွေ.ကို အတော်လေး…အကျိုးပြု..ခဲ့ တယ်နော်
ဆ၇ာဇော်ဇော်အောင်တို့သစ္စာနီ..တို့ ဆိုလည်း..အနုပညာလောက တိုးတတ်ဖို့ ….
ဆ၇ာတာရာမင်းဝေ ဆိုလည်း..အနုပညာ ကို ချစ်တတ်လိုက်တာ…
ဆ၇ာမ ဂျူးကိုတော့ ကိုယ် မဝေဖန်တတ်ဘူး.။ မိန်းမတွေ..တော်ဖို့တတ်သိလိမ္မာဖို့ ..သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်..သာယာ ဖို့ ..အနုပညာ ကောင်းမွန်လာဖို့ ..အင်း..သူမ မှာက ရည်ရွယ်ချက်တွေ..တော်တော်များတယ်နော်။
ကိုယ်လေးစားအားကျရတဲ့ ဆရာကြီးတွေ..ဟာ ကိုယ့်ထက် အဆများစွာ..သာ တဲ့ ပိုမြင့်မြတ်တဲ့ 
ရည်ရွယ်ချက်တွေ..နဲ့ရှိခဲ့ တာပါ။
ကိုယ် သူတို့ ကို သိပ်လေးစားပါတယ် ။
ကိုယ့်ရဲ့ ကျေးဇူးရှင်ကြီးတွေ..ပါ ။
ကိုယ့် ကို အမြဲ.တမ်း….( သိမ်မွေ့စွာ..) ဝေဖန် အားပေးခဲ့ တဲ့မန္တလာသူ ကို အရမ်းကျေးဖူးတင်ပါတယ် ။
ကိုယ်က စာပေက်ို ချစ်တဲ့သာမန် လူငယ် တစ်ယောက်ဆိုတော့ မန္တလာသူတို့ လို…
တကယ့်စေတနာနဲ့ ဝေဖန် မယ့်မိတ်ဆွေတွေ…အရမ်းလိုအပ်ပါတယ်ဗျာ..။
ကိုယ့်ကို ဝေဖန်ပါ။ အားပေးပါ ။ကိုယ် မှားနေတာ…ပြင်သင့်တာရှိရင် လည်း.(.အားမနာတမ်း).ထောက်ပြ ပါ ။
ကိုယ် လှိုက်လှဲစွာ..ကြိုဆိုနေပါတယ် ။
အခု စာလေးကို လည်း…စိတ်မရှိပါနဲ့ နော်။ ကိုယ် က မန္တလာသူ၊ရဲ့ မေးလ် လိပ်စာကိုမသိ လို့ဒီလို ပဲ..ရေးပို့ လိုက်ပါတယ် ။
အစစအရာရာ အတွက် တကယ်..လေးစားစွာ.ကျေးဇူးတင်နေလျက်ပါ…။
ကိုယ်လဲ စာပေက်ို ချစ်တဲ့သာမန် လူတစ်ယောက်ပါဘဲ။ ဒါ့ ကြောင့် ကိုယ် က အပြု သဘော သက်သက်ဝေဖန်မှု ပြုလေ့ ရှိပါတယ်။ ကောင်းတဲ့ ၊အတွေးအခေါ်ပါတဲ့ စာလေးတွေကို လဲ သဘောကျတာမို့ 
အမြဲ အားပေးပါတယ်။စာတပုဒ် ကို ဖတ်လိုက်ရင် စာေ၇းသူရဲ့ စေတနာကို သိသာထင်ရှားစွာ တွေ့ နိုင်တာဘဲလေ။ ကဗျာ ၊ဆောင်းပါးတပုဒ် ပုဒ်ကနေ ကောင်းတဲ့ သုတ၊ရသ တခုခုကို စာဖတ်သူကို ပေးစွမ်းနိုင်၇င် ကောင်းတဲ့ စာကောင်းပေမွန်ဘဲပေါ့ ။
အလင်းဆက် မှာလဲ အလင်းဆက်လေးစားအားကျရတဲ့ ဆ၇ာကြီးတွေလို မြင့် မြတ်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ.
ရှိလိမ့် မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ အများအတွက် သူတို့ ၇ဲ့ အနုပညာနဲ့
အကျိုးပြုနေကြတာဖြစ်လို့ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေ အတွက် စံပြု ထိုက်တဲ့ သူတွေပါဘဲ။
ဆက်သာ ကြိုးစားပါ။ အမြဲ အားပေးနေပါတယ်။